SIDA LOO SAMEEYO SHABAKADDA MAXALIGA AH EE WINDOWS 7 - WINDOWS - 2020
Ugu Weyn Ee Windows
Isku xir oo la isku xiro shabakadda maxaliga ah ee Windows 7
TAR.GZ waa nooca archive ah oo loo isticmaalo nidaamka hannaanka Ubuntu. Waxay badanaa ku kaydisaa barnaamijyo loogu talagalay rakibidda, ama miisaanno kala duwan. Ku rakib nuqulka barnaamijkan dheereynaya si uusan si fudud u shaqeyn doonin, waa in aan laga saarin oo la isku keenin. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ka wada hadalno mawduucan gaarka ah si faahfaahsan, oo muujinaya dhammaan kooxaha iyo qorista tallaabo kasta oo lagama maarmaan ah tallaabo tallaabo ah.
Ku rakib Arjiga TAR.GZ Ubuntu
Ma jiraan wax dhib ah oo ku yimaada habka loo xakameynayo iyo diyaarinta barnaamijka; wax walba waxaa loo maraa heer caadi ah "Terminal" iyadoo horay loo sii mariyey qaybo dheeraad ah. Waxa ugu muhiimsan waa in la doorto xarfaha shaqada si markaa ka dibna aan wax dhib ah jirin wax dhibaato ah kuma jiraan rakibidda. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aanad bilaabin tilmaamaha, waxaan dooneynaa in aan ogaano inaad si taxadar leh u baari karto bogga rasmiga ah ee barnaamijka horumariyaha barnaamijka loogu talagalay joogitaanka DEB ama RPM baakadaha ama rasaasta rasmiga ah.
Ku rakibidda macluumaadka noocaas ah waxaa laga dhigi karaa mid sahlan. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan kala soocidda xirmooyinka baakooyinka RPM ee maqaalkeenna kale, laakiin waxaan sii wadaynaa tallaabada ugu horreysa.
Eeg sidoo kale: Ku rakib baakooyinka RPM ee Ubuntu
Talaabada 1aad: Ku rakib qalabyada dheeraadka ah
Si aad u fuliso hawsha, waxaad u baahan doontaa hal adeeg oo kaliya, oo ah in la soo dejiyo ka hor inta aan la bilaabin isdhexgalka. Dabcan, Ubuntu horeyba waxay u leedahay dhisme-dhajiye, laakiin joogitaanka aaladda loogu talagalay abuurista iyo xirmooyinka baakooyinka waxay kuu oggolaaneysaa inaad u rogto aruurinta shey gaar ah oo ay taageerto maamulaha faylka. Thanks to this, waxaad u wareejin kartaa DEB-xirmo dadka kale ama ka tirtirto barnaamijka kombiyuutarka gebi ahaan, iyada oo aan tagin faylasha dheeraadka ah.
Furan liiska oo ku ordo "Terminal".
Geli amarkasudo apt-get install qalab dhejis ah dhisma-muhiim ah autoconf automakesi loogu daro qaybaha saxda ah.
Si aad u xaqiijiso in lagu daro, waxaad u baahan doontaa inaad geliso furaha sirta ee xisaabta ugu weyn.
Dooro ikhtiyaar Dsi aad u bilawdo hawlgalka lagu daray faylasha.
Sug inta uu socdo geeddi-socodka si uu u dhamaystiro, ka dib marka laga hadlayo khadka taleefanka.
Nidaamka lagu rakibayo qalab dheeraad ah marwalba waa uu guuleeystaa, sidaa daraadeed waa in aysan jirin wax dhibaatooyin ah oo tallaabadan. Waxaan u dhaqaaqeynaa tallaabo dheeraad ah.
Talaabada 2aad: Ka qaadida ariida barnaamijka
Hadda waxaad u baahan tahay inaad ku xirto wadista adigoo kaydkaas ku keydiyay ama aad sheyga ku soo gelisay mid ka mid ah faylasha kombiyuutarka. Taas ka dib, sii wado tilmaamaha soo socda:
Furi faylka feylka oo aad u raacdid faylka kaydinta kaydka.
Right-click u dulsaar oo dooro "Guryaha".
Raadi jidka TAR.GZ - waa faa'iido u lahaanshaha hawlaha konsole.
Orod "Terminal" oo waxaad tagtaa buug kaydinta kaydkan iyada oo la adeegsanayo amarkaCd / guriga / user / foldermeesha user - magaca isticmaalaha, iyo faylka - magaca buugga.
Ka saar faylasha adigoo adeegsanaya tarjumada-xvf falkon.tar.gzmeesha falkon.tar.gz - magaca arjiga. U hubso inaad gashid oo kaliya magaca, laakiin sidoo kale.tar.gz.
Waxaa laguu ogaan doonaa liistada dhammaan xogta ay awoodaan in ay soo saaraan. Waxaa lagu keydin doonaa galka cusub oo gaar ah oo ku yaalla waddo isku mid ah.
Waxa kaliya oo ay ku jirtaa oo keliya in la ururiyo dhammaan faylasha la helay oo loo dhigay hal xirmo ah oo loogu talagalay rakibidda caadiga ah ee kombiyuutarka.
Talaabada 3aad: Isu diyaari khariidadda lacagta
Tallaabada labaad, waxaad ka soo qaadatay faylasha laga soo qaaday aruurinta waxayna ku meeleeyeen diiwaanka caadiga ah, laakiin tani ma hubinayso shaqada caadiga ah ee barnaamijka. Waa in la isu keenaa, siinta muuqaal macquul ah oo sameynta rakibaha lagama maarmaanka ah. Si tan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa amarrada caadiga ah "Terminal".
Ka dib markaad joojiso, ha xirin qandaraaska oo si toos ah ugu tag faylasha la abuuray iyada oo loo marayo amarkafalkan cdmeesha falkon - magaca liiska loo baahan yahay.
Badanaa waxaa jira qoraallo qoraal ah oo horay loogu soo ururiyey, markaa waxaan kugula talinaynaa inaad marka hore hubiso amarka./bootstrap, iyo haddii ay dhacdo in aan la shaqeyn karin./autogen.sh.
Haddii labada kooxood la jebiyey, waxaad u baahan tahay inaad ku darto qoraalka lagama maarmaanka ah. Ku guuleysta galitaanka qunsulku amarka:
automake --gnu --ad-maqan -code - soign
Iyadoo lagu darayo baakooyinka cusub waxay u jeedin kartaa in nidaamku ka maqan yahay maktabadaha qaarkood. Waxaad arki doontaa ogeysiiska u dhigma "Terminal". Waxaad maktabadda maqan la raaci kartaa amarkasudo apt rakel magacameesha namelib - magaca qaybta loo baahan yahay.
Dhamaadka talaabada hore, bilaw inaad isku dubbarido adoo isticmaalayasamee. Waqtiga dhismuhu wuxuu ku xiran yahay xaddiga macluumaadka ee ku jira faylka, markaa ha xirin qunsuliyada oo sug in ogeysiis ku saabsan isku dhafka guuleysta.
Ugu dambeyntii geliJeclow.
Talaabada 4: Ku rakib baakada dhameystiran
Sida horeba u sheegnay, habka loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro xirmo DEB ah oo ka socda archive ah si loogu sii rakibo barnaamijka si kasta oo habboon. Waxaad ka heli doontaa xirmada lafteeda isla buugga TAR.GZ la keydiyo, iyo hababka rakibida suurtogalka ah, arag maqaalkeena gaarka ah ee xiriirka hoose.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri: Ku rakibo xirmooyinka DEB Ubuntu
Marka la isku dayayo in lagu rakibo kaydka dib u eegista, waxaa sidoo kale muhiim ah in la tixgeliyo in qaar ka mid ah lagu soo ururiyey habab gaar ah. Haddii habka kor ku xusan aanu u shaqayn, fiiri diiwaanka TAR.GZ laftiisa lana helin faylka halkaas. Readme ama Ku rakibsi aad u akhrido sharraxaadda rakibida.
https://termotools.com so.termotools.com © Windows 2020